Kulanka Arbacada; Laba Guddoomiye iyo Laba Gole Baarlamaan ………? – Madal Furan
Hoy > Warka > Kulanka Arbacada; Laba Guddoomiye iyo Laba Gole Baarlamaan ………?
Kulanka Arbacada; Laba Guddoomiye iyo Laba Gole Baarlamaan ………?
Muqdisho (Madal Furan) – Iyadoo Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muudey uu iclaamiyey kulanka Baarlamaanku inuu dhici doono subaxnimada Arbacada ah isla markaasna u kala diray Xildhibaanadda qoraalkan “Mudane Xildhibaan, Sii hayaha Guddoomiyaha ahna Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka wuxuu ku wargelinayaa Dhammaan Xubnaha Golaha in Maalinta berri oo Arbacada ku beegantahay Tr. 04/04/2018 Saacadda: 09:00 Subaxnimo la qaban doono Kulanka Guud ee Golaha shacabka Ajendaha: Mooshinka Kalsooni kala noqoshada Guddoomiyaha Golaha Shacabka.”
Dhinaca kale Guddoomiye Jawaari iyo Xildhibaanada la siyaasadda ah ayaa ka digay in kulanka Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muudey uu iclaamiyey uusan aheyn mid ansax ah.
Haddaba, Aragtiyahan kala duwan ayaa waxay inoo muujinayaan in maalinimadda Beri ah ay Xarunta Baarlamaanka DFS ay ka abuurmayso isku qabsi kursiga Guddoomiyaha iyadoo Guddoomiye Jawaari iyo Ku xigeenkiisu isku haystaan cidda guddoomin doonta shirka Golaha oo xataa aan lagu mideysneyn Ajandihiisa.
Waxaa kaloo muuqata in Xildhibaanada kala taageersan Labada Guddoomiye ay isu tagaan gacan kadib marka la isku qabsado kurisga Guddoomiyaha.
Lama oga doorka ay yeelan doonaan ciidamadda amniga haddii ay timaado isku dhac ka dhex curta Xildhibaanada Baarlamaanka, balse waxaanu xasuusanaa in sanadkii 2011 ay ciidamadda AMISOM meel dhexe ka istaageen dagaalkii kuraasta ee Xildhibaanadu isla dhaceen.
Taliyihii ciidamada Itoobiya oo la toogtay
Shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ka tirsan degmada Cadale.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo Amar culus ka soo saaray dhoofinta Dhuxusha